Iphepha leendaba i-900 Newsletter Latin America-Geofumadas
Iindaba zeBentley Newsletter yaseLatin America
NgoSeptemba, 2015 Microstation-Bentley
Ukusuka kwi-Ofisi kaMongameli kaMongameli weMonti kwiLatin America u-Alfredo Castejón unxibelelana nathi ngohlobo lokuqala ngale fomati yonxibelelwano:
Sivula inqanaba elitsha lonxibelelwano nabasebenzisi bethu malunga noku newsletter Ngexesha kwimbali lika-900 esiya kukhumbula iminyaka emininzi. Lixesha apho igama esiya kuliva rhoqo lisithi "Ixhunyiwe" (okanye UKUXHANYELWA). Intsingiselo yeli gama iya kwenziwa ngemigangatho eyahlukeneyo nakwiimeko ezahlukeneyo. Ngesi sihlandlo, sazisa ngegama kwinqanaba elifumana uHlelo lwethu lweCustomer ConNECT.
Njengokuba iiveki zihamba, iziphumo zokukhuthaza umxholo wokuba ngaBasebenzisi abaDityanisiweyo, ukusebenza kwiiProjekthi eziDityanisiweyo naphakathi kweNkampani eziDibeneyo ziya kucaca gca; kunye nefuthe eliya kuthi libe nalo ngalo mzuzu kwimbali yethu.
Ndiyakumema ukuba ufunde ngazo zonke iindlela ezikhoyo ezibonisiweyo zolu hlobo lweemveliso zethu. Ngeli xesha oku kusenzeka, sisondela kwindibano yethu yendibano: Unyaka kwiNkomfa yeZiseko zoLwakhiwo, apho siya kuthi kwakhona sibone inkqubela phambili emangalisayo kwiProjekthi yeziSeko.
Kule ntshayelelo imfutshane ndiyaphinda into endiyithethileyo izihlandlo ezininzi: ngalo lonke ixesha uNjineli ovela kwiLatin America engahambeli lo msitho, lithuba elihle lokufunda le-Territory ilahlekile. Ndicenga abahlali base Latin America ukuba benze umzamo ohambelanayo wokuthatha inxaxheba kwesi siganeko sikhethekileyo. Ngendlela efanayo, ndiyathemba ukuba umsebenzi owenzayo ngoku kwiiprojekthi zakho uya kuvelisa izinto eziyimfuneko zokuphucula inxaxheba yakho kuHlelo lwe2016.
Ndithatha eli thuba ukubulisa abaSebenzisi kwaye ndibanqwenelele impumelelo kwiProjekti zabo.
Iinkqubo ze-900, Inc.
I-ProjectWise: Iiprojekthi zobuchule kwezokwakha
Dibana kule Umboniso ocacisayo Kukuphucula njani ukuhanjiswa kweeprojekthi zokwakha ngokuphucula unxibelelwano phakathi kwamaqela asebenzayo kusetyenziswa iProjekIWe, inkqubo yentsebenzo eyilelwe yiNkqubo yeeNkozo ukuze kubuyiswe ukuhanjiswa kweeprojekthi zobunjineli:
Ukuze ufunde ngakumbi ngeProjekthiWise
Ushicilelo lweCONNECT: Zama uKamva
I-900 isandula kupapashwa i-ConNECT Edition, iqonga eliqhelekileyo lokuhanjiswa kweprojekthi kwimisebenzi yolwakhiwo. Ukuphehlelelwa kuqhutywa uthotho lweziganeko kwihlabathi liphela, e-Latin America umsitho wenzeka kwisiXeko saseMexico,dibana kule vidiyo belunjani lokupapashwa kweCONNECT Edition yeWindows.
Ukukhutshwa kubandakanya ukubakho kweinguqulelo ezintsha zeMicrosoftStation kunye neVeligator, phakathi kwabokuqala ukuzama ezi nguqulelo zintsha kunye nokuzivavanya nabo ngenkqubo yethu yokwazisa. Bona apha indlela yokwenza.
Yazi ii -apples zasimahla zeMicrosoft ezisezandleni zakho
Fumanisa ii -apps zasimahla ezibonelelwa ziiNkqubo zeePortugal zabasebenzisi kunye neengcali kulwakhiwo, ubunjineli nolwakhiwo. Fumana apha Uluhlu lweeapps zokusebenza nokuba zizixhobo zakho ezikwimobhayili, yabasebenzisi bakaMicrosoft yeWindows okanye abaHlaziyo abaza kukunceda wenze lula iinkqubo zemihla ngemihla kwiiprojekthi zeziseko zakho.
Unyaka kwinkomfa yeZiseko Zophuhliso ze2015
UNyaka kwiNgqungquthela yeZiseko zoNcedo i-2015 uyeza eLondon Njengonyaka ngamnye amakhulu eengcali kwiziseko zophuhliso aya kuzimasa iinxalenye zocweyo lwendibano kunye nezobugcisa ezifundiswa apho, ukongeza ekunikezeleni ubungqina ngamakhulu eeprojekthi ezivela kwihlabathi liphela ezibonisiweyo apho . Ungasishiya nathi eLondon
Funda ngakumbi apha.
I-900 ikwazonwabisa ngeyona projekthi ibalaseleyo yabasebenzisi bayo kwincwadi yonyaka egxininisa ubuchule, umbono, umgangatho kunye nemveliso: Incwadi yonyaka yezibonelelo.
Ungabona ushicilelo lonyaka ophelileyo apha
Joyina i-Systems yeNtlalontle yoLuntu ngeSpanish
Singathanda ukumema ukuba uqhagamshele nathi ngokusebenzisa iinethiwekhi zethu ezahlukeneyo zentlalo, ezinikezelwe kwintengiso yaseLatin America.
Ukuba ufuna ukugcina unxibelelwano olusondeleyo kuthi kunye noluntu lweshishini, sishiya inethiwekhi zethu ezikhoyo:
facebook: IiNkqubo zeeWindows ngeSpanish
facebook: Ulwakhiwo loLuntu
facebook: Uluntu lwamanzi
YouTube: IiNkqubo zeeMeditera Latin America
Twitter: Iinkqubo ze-900 LA
Post edlulileyo«Edlulileyo Qgis - Thematizing iziza ezisekelwe intsimi yeqhosha cadastral
Post Next Ukutshintshiselwa kwee-3 zeziganeko zeCadastre, ukubhaliswa kunye nokuHlalwa kweMhlaba - UkuPasa kokuQalaOkulandelayo "